राेचक संसार Archives - Page3of 19 - krishipost.com
अचुक औषधिकाे काम गर्छ डल्ले खुर्सानीले, यस्ता छन् अचुक फाइदाहरु
एजेन्सी । डल्ले खुर्सानी स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । यसको सेवन प्राय मानिसहरको भान्सामा हुने गर्दछ । खुर्सानि सानो बोटमा फल्ने गर्दछ । यसको सेवन गर्दा धेरै रोगबाट बच्न सकिन्छ । यसको सेवन गर्दा हाम्रो शरीरलाई हुने...
एजेन्सी । साग आफैंमा उपयोगी तरकारी हो । पकाएर र काँचै खान मिल्ने साग स्वादिलो पनि हुन्छ । त्यसमा पनि रायोको साग बहु उपयोगी हुन्छ । संसारभर पाइने अनकौँ तरकारीमध्ये दोस्रो बढी पोषणयुक्त तरकारीमा रायो पर्छ । तसर्थ, रायो स्वास्थ्यका दृष्टिले झनै लाभदायक छ...
तपाइले बट्टाईको अण्डा खानु भएको छ ? यस्ता-यस्ता रोगका लागि फाइदा !
काठमाडौं । नेपालमा बट्टाई पालन निकै फस्टाएको छ। बट्टाईको अन्डा र मासुलाई पौष्टिक खाद्य पदार्थ मानिन्छ। यसको मासुभन्दा पनि अन्डा निकै स्वास्थ्यबर्धक हुने विज्ञहरुको भनाइ छ। बट्टाईको अन्डा स्वास्थ्यका हिसाबले बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई फाइदाजनक मानिन्छ।नेपालमा पाँच प्रजातिका बट्टाई पाइन्छन्। तीमध्ये ‘कमन क्वेल’ बट्टाई पाल्ने सोख...
फर्सी हो अनेकौं रोगको उपचार, यस्ता छन् फाइदा
काठमाडौं । फर्सी सर्वगुणसम्पन्न तरकारी हो । विज्ञहरूका अनुसार, यसमा क्याल्सियम, आइरन, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट लगायतका गुणहरू भेटिन्छन् । नियमित रूपमा फर्सी खाने गर्दा रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ्छ र तौल पनि घट्छ । रक्तचाप र मधुमेहका रोगीलार्य त फर्सी वरदान नै हो । टाइप २...
गाउँमै पाइने दूधे झारका यति धेरै चमत्कारी फाइदा यस्ता ५ रोगको औषधि
काठमाडौँ । गाउँमै पाइने दूधे झार का यति धेरै चमत्कारी फाइदा सामान्य जरो देखि ठूलो रोग पनि हुन्छ निको । अहिले मानिसहरु चिकित्स उपचार पद्धतिमा मात्र भर नपरी आयुर्वेदिक पद्धतिइ पनि अगालिरहेका छन् । किन भने चिकित्सा पद्धतिका धरै साइड इफेट रहेको हुन्छ त्यसैले...
कुखुराको भाले ३० दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा किन यस्तो गरीयो ?
एजेन्सी । चोरी, डकैती जस्ता अपराधिक मुद्दामा प्रहरीले मानिसहरुलाई जेलमा थुनेको त सुनैकै कुरा हो तर, आज हामीले प्रहरीको हिरासतमा रहेको कुखुराको भालेको बारेमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौ । प्रहरीले दुईटा भालेलाई ३० दिनदेखि नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीले उनीहरुमाथि सट्टेबाजीको आरोप लगाएको छ...
यी शाकाहारी खानेकुराहरुमा पाइन्छ मासुमा जतिकै प्रोटीन
मानव शरीर विकाश गर्न, मांसपेशी मजबुत, बलियो बनाउनको लागि विभिन्न प्रकारका प्रोटिनको आवश्यकता पर्दछ । यदि हाम्रो शरीरमा प्रोटिनको मात्रा कमी भयो भने विभिन्न प्रकारका समस्याहरु उत्पन्न हुन सक्छ । तसर्थ हाम्रो शरीरमा प्रोटिनको मात्रा कम हुन नदिन यस्ता शाकाहारी खाने कुराको सेवन गर्ने...
मेथीको सागका फाइदै फाइदा
मेथीको साग होस् वा गेडा यो स्वादिलो मात्र होइन स्वास्थ्यका लागि समेत फाइदाजनक हुन्छ । मेथीको नियमित सेवनले पेटसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याको निराकरणमा सहयोग गर्दछ । आयुर्वेदमा मात्र नभै आधुनिक चिकित्सा पद्धतिमा समेत विभिन्न खाले औषधि बनाउनका लागि यसको प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।...
बेथेको साग मलाई मन पर्छ । आजको लेखमा यसका फाइदाबारे पाठकलाई जानकारी पस्कने छौं । प्रकृतिले मानव स्वास्थ्यका लागि बेथे दिएको छ । हामीले बेथेको साग र दाना खानाले के कस्ता रोग निको हुन सक्छ भन्नेबारे जानकारी प्राप्त गरेर सबैले बेथे खाने गरे ठूलो...
काठमाडौं । हामिले घरमा विभिन्न थरीका तरकारी फलाएका हुन्छौं । बजारमा पनि हामिले कहिल्यै नदेखिएको तरकारी राखेको पनि देख्छौं । बजारमा पाइने हरेक तरकारीको मूल्य सिजन अनुसार फरक फरक हुन्छ । तरकारी कुनै महँगो हुन्छन्, त कुनै सस्तो । कुनै चीज दुर्लभ छ, चने...
« अघिल्ला 12345 … 19 पछिल्ला »